Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Uganda.
Home»Somali News»Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Uganda.
Facebook	Twitter	Sunday, February 03 2013	Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Uganda.	Written by Admin
Add comment	Kambala ( SPR ) : Ilaa 500 oo Askari oo qayb ka noqonaya Ciidamada Xooga dalka Soomaaliya ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay Dalka Uganda,kadib mudo bilooyin ah oo tababar uu uga socday wadankaasi.
Wasiirka Gaashaandhiga Dowlada Federaalka Soomaaliya Cabdi xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa sheegay in ciidamadan mudadii uu tababarka u socday ay qaateen tababaro ku aadan sidii ay awood ugu lahaan lahaayeen difaaca dalkooda.
Ciidamadan tababarka loo xiray ayaa kharashaadka ku baxayay waxaa gacan ka gaystay Midowga Yurub iyo Maraykanka,iyadoona sidoo kale ay tababarada ay qayb ka ahaayeen bixintiisa macalimiin Ajaanib ah.
Ciidamada Tababarka dhamaystay ayaa la filayaa in mudo ilaa 45 cisho ah ay sidoo kale qaataan taasi oo loogu wacyi galinayo gaar ahaana lagu barayo dibishiliinka iyo barida wadaniyada.
Tababarka ay ciidamadani dhamaysteen ayaa waxaa uu kusoo beegmayaa xili Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Cabdi Xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi uu sheegay dhowaan in ay bilaabeen isku dabaridka iyo habaynta ciidanka xooga dalka,haatana ay dayactiro ku wadaan xerooyinkoodii iyo cisbitaalkii ciidanka xooga dalka ee Muqdisho.	Social sharing
DHAGAYSO : Khilaaf ka dhashay Ciidamo ka tirsan Dowlada Federaalka oo ku wajahan Kismaayo.
Ciidamada Dowlada oo howl galo Dad lagu soo qabtay ka fuliyay Xamar Jajab.
Ciidamo iyo Gaadiid dagaal oo soo gaaray Boosaaso iyo Aragtiyo kala duwan oo laga bixinayo Imaanshiyahooda Boosaaso.
DAAWO SAWIRADA : Boqolaal qof oo lagu soo qabtay howl gal laga sameeyay mid kamid ah xaafadaha Muqdisho
Howl gal Amniga lagu xaqiijinayo oo si xiriir ah uga soconaya Magaalada Muqdisho.
« DHAGAYSO : Madaxweynaha Puntland oo ka digay majaraha habaabin in lagu sameeyo dilka Suldaan Muuse Faarax ( Muuse Onkod ) .	Degmooyinka Caasimada Soomaaliya oo ku tartamaya helitaanka Abaalmarin qaali ah. »